Miisaaniyadda Puntland ee dakhliga sanadkan oo hoos u dhac wayn uu ka jiro (dhegayso) – Radio Daljir
Agoosto 7, 2018 10:32 b 1
Miisaaniyadda Puntland ayaa hoos u dhac wayn uu ka muuqdaa sanadkaan, marka lala barbar dhigo sanadihii hore, waxaana wasiirka maaliyadda Puntland oo maanta baarlamaanka horgeeyey misaaniydda ku sababeeyey darruufaha abaarta iyo xayiraaddii dhanka xoolaha ee wadamada Carabta.
Wasiirka maaliyadda Puntland Cabdiqaadir Carshe Dhaqaaje ayaa sheegay miisaaniyaddu inay is-dhintay sanadkan 11%.
Su’aalaha la waydiiyay wasiirka maaliyadda ayaa waxaa ka mid ah
Ciidamadii Puntland ay la wareegtay dowladda faderaalka dhaqaalahooda
Sababaha loogu dhaqmin miisaaniyadda dowladda
Xuquuqaha ka maqan shaqaalaha iyo ciidamada.
Warbixinta Axmed Sheekeeye ayaa Garoowe kasoo diray .
WAA DOORASHADA SOO SOCOTEE.
JEEBKAA LAGU SII SHUBTAY SI DOORASHO LOOGU GALO.